Sida loo doorto kiniin | War gadget
Sida loo doorto kiniin
Qolka Ignatius | | Kiniiniga
Sannadihii ugu dambeeyay, kiniiniyada ayaa noqday aaladda ugu jecel qoysaska badan markay timaado isku xirka internetka, helitaanka shabakadaha bulshada, sameynta raadinta internetka, dirista emayllada ... Waqtigan xaadirka ah suuqa waxaan leenahay awooddeenna moodooyin kala duwan, nidaamyo kala duwan oo kala duwan, cabbiro kala duwan, qiimayaal kala duwan ...
Hadaad aaminsantahay wuxuu ahaa post-pc oo waxaa la gaadhay wakhtigii la iibsan lahaa kaniiniga si hawl maalmeedka looga qabsado meel kasta iyada oo aan ku xirnayn kombuyuutar, halkan ayaa ah tilmaan sida loo doorto kiniin. Maqaalkani, waxaan ku xisaabtameynaa faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka mid kasta oo ka mid ah nidaamyada hawlgalka iyo moodooyinka laga heli karo suuqa.
1 Cabbirka sawirka
2 Nidaamka hawlgalka
3 Iswaafajinta / Nidaamka deegaanka ee codsiyada
5.1 Kiniiniyada Android
5.3 Dusha Microsoft
Waqtigan xaadirka ah suuqa waxaan ku haynaa qiyaasta shaashadda kala duwan ee taga laga bilaabo 8 inji ilaa 13. Cabirka shaashaddu waa mid ka mid ah go'aannada ugu waaweyn ee ay tahay inaan tixgelinno, maadaama haddii aan raadineyno kala duwanaansho oo aan u dhaqaajin karno meel kasta, inta yar ayaa ka fiican.
Haddii aan dooneyno inaan dhaqaaqno laakiin sidoo kale aan dooneyno inaan sida ugu badan uga faa'iideysanno, qaabka 13-inji ah ayaa laga yaabaa inuu yahay midka ugu fiican, gaar ahaan haddii ujeedkeenu yahay inaan gaarno beddel kombiyuutarkayaga ama laptop-ka iyada oo aan loo bixin cabbirka shaashadda.
Nidaamka qalliinka ayaa ah dhinac kale oo ay tahay inaan tixgelinno. In kasta oo ay run tahay in Android uu yahay nidaamka ugu hawlgal badan ee adduunka laga isticmaalo, haddii aan ka hadalno kiniinnada, waxoogaa wey yara dhacaan, maaddaama codsiyada badankood isku xirkooda looma habeynin in loo isticmaalo kiniin ahaans, wax ku dhaca Apple nidaamka iOS ee deegaanka.
Intaas waxaa sii dheer, macruufka wuxuu na siiyaa tiro badan oo codsiyo ah nooc kasta, codsiyada ku habboon shaashadda weyn ee noo oggolaaneysa inaan uga faa'iideysanno faa'iidadan taleefannada gacanta. Apple wuxuu diyaar u yahay dadka isticmaala iPad shaqooyin gaar ah sida shaashad kala qaybsan ama shaqooyin badan, qaar ka mid ah howlaha aasaasiga ah ee kiniin kasta ay tahay inuu lahaado.
Ta saddexaad, in kastoo qaar badani u qaadan waayaan kiniin, haddana waa inaanu dhignaa Dusha Microsoft. Faa'iidada ugu weyn ee ay bixiso Microsoft Surface range ayaa laga helayaa taas Waxaa maamula Windows 10 nuuciisa oo buuxa, sidaas darteed waxaan ku rakibi karnaa codsi kasta oo laga heli karo kombuyuutarrada gacanta iyo laptop-yada iyada oo aan xad lahayn.
Windows 10 wuxuu isku darayaa nooc loogu talagalay kiniiniyada ku habboon oogada, taas oo noo ogolaaneysa inaan la macaamilno sidii inay ahaan lahayd kiniin Android ah ama iPad laakiin oo leh awood iyo waxqabad ay PC na siiso.
Iswaafajinta / Nidaamka deegaanka ee codsiyada
Sidaan ku sheegay qodobkii hore, Android Ma aha nidaamka deegaanka haddii aan raadineyno kiniin si loo badalo kombuyuutarkeena maadama tirada codsiyada la jaan qaada ay aad u kooban yihiin. Sanadihii la soo dhaafay, Raadiyaha weyn ee raadinta ayaa umuuqda inuu keydiyay qalabkan si uu diirada u saaro taleefannada casriga ah, qalad qiimo badan ku kacaya mustaqbalka fog.
Apple sameeyaa ku dhowaad hal milyan oo iPad ah barnaamijyada la jaan qaada iPad-ka, codsiyada ka faa'iideysanaya dhererka iyo ballaca shaashadda iyo in kiisaska badankood, ay yihiin isla barnaamijyada aan ku rakibi karno iPhone-ka, sidaa darteed maahan inaan sameyno labalaab.
Microsoft oo leh dusha sare ayaa ah xulashada ugu habboon haddii aynaan noolaan karin la'aanteed barnaamijyada desktop-ka taas oo aan caadeysanay la'aantoodna aan si sax ah u shaqeyn karin.
Kiniiniyada ay maamusho Android, waxay ku dhejinayaan meeshayaga isla qalabkii aan ka heli karno taleefannada casriga ah ee lagu maamulo isla nidaamka hawlgalka, kaas oo noo oggolaanaya inaan ku xirno xarun dekedda USB-C si aan ugu xirno kaarka xusuusta, usha USB, wadid adag ama xitaa kormeere haddii ay taageerto shaqadan.
Markii la bilaabay iPad Pro, ragga ka socda Cupertino waxay ballaariyeen tirada xulashooyinka aan ku xirmi karno iyadoon had iyo jeer loo baahnayn inaan sanduuqa dhex marno. The iPad 2018 Pro wuxuu ku beddelay xiriirkii danab dhaqameedka dekedda USB-C, oo ah deked loo sii deynayo Waxaan ku xiri karnaa akhristaha kaarka, kormeeraha, disk adag ama xarun si aan isugu xirno aalado kala duwan.
Surface-ka Microsoft wuxuu aad ugu egyahay laptop-ka kumbuyuutarka aan lahayn, sidaa darteed waxay na siisaa isku xirnaansho sida laptop-ka, oo ah aaladda na siisa kala duwanaanta ugu weyn marka la isku xirayo qalab kasta si loo ballaariyo howlaha ay na siiso.
Dhammaan moodooyinka sare ee kiniiniga ayaa noo oggolaanaya inaan ku xirno labada kumbuyuutar iyo qalin si aan ugu sawirno shaashadda. Intaa waxaa dheer, moodooyinka ay maamusho Windows, sida Samsung's Galaxy Tab iyo Microsoft's Surface sidoo kale aan isku xidho jiir, sidaa darteed isdhexgalka nidaamka qalliinka ayaa aad uga raaxeysan.
Sanadihii la soo dhaafay, qiimaha taleefannada casriga ah ayaa si aad ah kor ugu kacay, mararka qaarna wuxuu ka badnaa 1.000 euro. Markii sanadihii la soo dhaafay, kiniiniyada ayaa sidoo kale kor u kacay qiimaha kororka badan ee waxtarka ay na siinayaan.
Nidaamka deegaanka ee kiniiniyada Android, sidaan kor ku xusay waa mid xadidan Sababtoo ah soosaarayaasha badankood waxay joojiyeen inay ku khamaaraan suuqan, iyagoo inta badan uga tagaya Apple, taas oo iyadu mudnaanteeda iska leh iska leh.
Moodooyinka hadda bixiya qiimaha ugu fiican ee lacagta suuqa waxaa bixiya Samsung galax tab tab, oo ka socda Samsung iyaga oo noo diyaarinaya moodooyin kala duwan oo ka yimid 180 euro, qiimo aan ku haysan karno awoodeena aasaasiga ah ee aan ku sameyn karno afarta shey ee aan inta badan ku sameyno kooxdeena, sida daawashada shabakadaha bulshada, booqashada degel, emayl u diro ...
Apple waxay bixisaa 9,7-inch oo iPad ah, iPad Mini, 10,5-inch iPad Pro iyo 11 iyo 12,9-inch iPad Pro. Qalinka Apple wuxuu ku habboon yahay oo keliya iPad Pro, markaa haddii fikradeena ay tahay inaan isticmaalno, waa inaan xisaabta ku darsanaa markaan iibsaneyno iPad-ka Apple. Qiimaha aasaasiga ah ee dhammaan moodooyinka iPad waa sida soo socota:
iPad Mini 4: 429 yuuro oo loogu talagalay qaabka 128 GB oo leh xiriir Wi-Fi ah.
iPad 9,7 inji: 349 euro oo loogu talagalay qaabka 32 GB oo leh xiriir Wi-Fi ah.
10,5-inch iPad Pro: 729 euro oo loogu talagalay qaabka 64 GB oo leh xiriir Wi-Fi ah.
11-inch iPad Pro: 879 euro oo loogu talagalay qaabka 64 GB oo leh xiriir Wi-Fi ah.
12,9-inch iPad Pro: 1.079 euro oo loogu talagalay qaabka 64 GB oo leh xiriir Wi-Fi ah.
Dusha sare ee Microsoft ayaa inna siiya xoogaa qeexitaannada aan ka heli karno kombuyuutarrada gacanta ee ugu sarreeya suuqa, laakiin kala duwanaanta ay bixiso kumbuyuutar aan kumbuyuutar lahayn, kumbuyuutar ay tahay inaan si gooni ah u soo iibsanno haddii aan doonno, sida ku jirta dhammaan moodooyinka iPad.
Qeexitaannada guud ee Dusha:
Gacaliye: Intel Core m3, jiilkii 5aad Core i7 / i7.
Awoodaha keydinta: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB
Qaabka ugu raqiisan, bilaa kumbuyuutareedka, wuxuu ka bilaabmaa 899 euro, (Intel Core m3, 4 GB RAM iyo 128 GB SSD) qiimo u muuqan kara mid sare oo kaniiniga ah, laakiin taasi haddii aan tixgelinno kala duwanaanta ay na siiso, labadaba codsiyada iyo dhaqdhaqaaqa labadaba, waa qiimo macquul ah oo macquul ah kaniiniga awoodaan.
Haddii Microsoft Surface-ka ay ka baxsan tahay miisaaniyaddaada, laakiin aad rabto inaad sii waddo ilaalinta fikradda ay na siiso, waxaan dooran karnaa Goobta Dhulka, kiniin leh waxqabad hoose qiimo jaban, in kastoo laga yaabo inuu u gaabiyo qaar ka mid ah dadka isticmaala ee aadka u baahan. Surface Go wuxuu ka bilaabmaa 449 euro oo leh 64 GB oo keyd ah, 4 GB oo RAM ah iyo processor-ka Intel 4415Y.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Kiniiniga » Sida loo doorto kiniin